Bush Tails ezifuywayo kwindawo yokuzifihla ematyholweni
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguMelanie
Indlwana yethu entle yeBush Tails ehambelana nesilwanyana isekwe kwiihektare ezingama-40 zamatyholo endalo angachukunyiswanga. Yeyona ndawo ifanelekileyo yokurhoxa kwabo bajonge ukukhaba emva kwaye bayonwabele ukuzola. Ibekwe ngokufanelekileyo kunye nemizuzu emi-5 yokuqhuba ukuya kwezinye iilwandle ezimangalisayo zaseQueensland kunye neelali ezinobuhlobo ze-Agnes Water kunye neDolophu ye-1770. Siziva sisikelelwe ngokwenene ukubiza le propati ekhaya kwaye sijonge phambili ukuba sithi gday real kungekudala!
Ikhabhathi yethu evulekileyo yesicwangciso ibucala kakhulu kwaye ikhululekile kwaye ikulungele ukukwamkela kunye nezilwanyana zakho ezinemilenze emine. Ibekwe phakathi kohlaza oluhle oluchumileyo kwaye yahlukile (25 mtrs) kwikhaya lethu.
I-Bush Tails yenzelwe abantu abatshatileyo kodwa inokwamkela umntu omdala okanye umntwana xa eceliwe. Singakwazi ukuhlalisa umatrasi womoya otofotofo xa ufuna. Iintlawulo ezongezelelweyo zinokufakwa.
Ikhabhinethi yethu inemigangatho egudisiweyo yekhonkrithi kuyo yonke indawo, iifeni ezingaphezulu (i-heater encinci yeenyanga ezipholileyo) kunye neyadi ebiyelweyo ekhuselekileyo kunye neengcango zesikrini zokhuseleko lokhuseleko lwezilwanyana zakho zasekhaya.
Siyazithanda izinja kwaye siyakuqonda ukubaluleka kokuthatha amaqabane ethu angcono kunye nathi ngeeholide ukuze ikhabhinethi yethu yenzelwe oku engqondweni.
Nceda wazi ukuba indawo eseleyo yepropathi yethu, ngaphandle kweyadi yangasemva, ayibiyelwanga. Izinja/izinja zakho zamkelekile ukuba ziqhube simahla / zikhuphe isikhokelo kodwa sicela ukuba zihloniphe abantu balapha (izilwanyana zasendle) kwaye nceda uqaphele ukuba unoxanduva lwezilwanyana zakho zasekhaya ngamaxesha onke.
Kwi-Bush Tails asinabo abamelwane ababonakalayo ngokuthe ngqo abaqinisekisa ubumfihlo obupheleleyo kunye noxolo. Nangona kunjalo sinezilwanyana zasendle ezininzi ngoko ke nceda wazi ukuba ungayibona ngamathuba athile ikhangaru/wallaby/goanna!
Mna ngokwam (uMel), uAndy kunye noDixie (i-kelpie yethu enobubele njengoko inokuba yi-superdog) biza iBush Tails ekhaya. Siyayithanda indalo kunye nezinto ezintle ngaphandle kwaye uya kuhlala usifumana sibumba egadini. Siyavuya ukuhlonipha ubumfihlo bakho kwaye siya kukushiya naluphi na unxibelelwano kuwe. Ngokuqinisekileyo silapha ukuze sikuncede ngayo nayiphi na indlela oyifunayo, masazise nje. Siyonwabela ibhiya, i-champagne, ukutya okulungileyo kunye nekofu kwaye sihlala sixoxa. Izinto esinomdla kuzo zibandakanya okusingqongileyo okumangalisayo kwangaphandle, ukukhempisha, ukwenza igadi, ukuphumla elunxwemeni kunye neYoga .... kwaye ngokuqinisekileyo sithandana ngokuhlekisayo nomntwana wethu onemilenze emi-4!
Mna ngokwam (uMel), uAndy kunye noDixie (i-kelpie yethu enobubele njengoko inokuba yi-superdog) biza iBush Tails ekhaya. Siyayithanda indalo kunye nezinto ezintle ngaphandle kwaye…